Gcwalisa iRosari Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukusebenza komthandazo we Irosari epheleleyo, kuyimfuneko ukubalisa nganye yeemfihlelo zayo, ezingama-20 (amashumi amabini). Ukongeza koku, kubalulekile ukuba ngamnye umthandazo wabo ngamnye uthandazwe, ukuqala kuMthetho woKhuphiswano, uBawo wethu, Dumisa uMariya, Uzuko nesichotho.
1 IRosari epheleleyo kubo bonke
2 Ukuthandaza iRosari eNgcwele (epheleleyo)
2.1.1 Imfihlelo yokuqala: Ukubhengezwa kuMariya
2.1.2 Imfihlakalo yesibini: Ukutyelelwa kweNtombikazi enguMariya kumzala wakhe uSt Elizabeth
2.1.3 Imfihlakalo Yesithathu: Ukuzalwa kukaYesu
2.1.4 Imfihlakalo yesine: Ukunikezelwa kukaYesu etempileni
2.1.5 Imfihlakalo yesihlanu: Umntwana olahlekileyo u-Yesu wamfumana etempileni
2.2 Iimfihlakalo ezibuhlungu
2.2.1 Imfihlakalo yokuqala: Ubuhlungu bukaYesu eGadini
2.2.2 Imfihlakalo yesibini ebuhlungu: Ukutyakatywa kukaYesu kubotshelelwe kwikholam
2.3 Iimfihlakalo ezizukileyo
2.4 Iimfihlakalo eziqaqambileyo
IRosari epheleleyo kubo bonke
Okwangoku Ingcwele yeRosari Yenziwe ngeemfihlakalo ezi-4 (ezine), nganye kuzo ilungelelaniswe namaxesha amahlanu (amahlanu). Iimfihlakalo zezi: Ukuzonwabisa, ukuqaqanjelwa, ubuqaqawuli kunye nokuKhanya. Ngaphandle koku, ngamanye amaxesha kuthathelwa ingqalelo ukuba ngokubalisa ezintathu (5) zazo, irosari ibiya kuba igqibile, ukuba nje aba baNwabile, abaLusizi kunye noZuko.
Kuphela Iimfihlakalo eziqaqambileyo NgooLwezine, kodwa iveki yonke abanye. Ukuba ufuna ukutsiba ukuKhanya, kuya kufuneka wenze uLwesine ozukileyo.
Ukuthandaza iRosari eNgcwele (epheleleyo)
Ukuqala ngeRosari eNgcwele, kuya kufuneka uqale ngePhawu loMnqamlezo, uMthetho weContrition, iCreed, uBawo Wethu, ooMariya abalishumi kunye noZuko. Iqala ngeMfihlelo eziVuyayo.
Iimfihlelo ezonwabisayo zonke ezo zinxulumene nokuzalwa kunye nobuntwana bukaYesu Krestu. Kananjalo yeyokuqala kwiimfihlakalo ezintlanu.
Imfihlelo yokuqala: Ukubhengezwa kuMariya
Ingelosi uGabriyeli yathunyelwa kwisixeko saseGalili, esibizwa ngokuba yiNazarete, ukuba sitshatele iNtombikazi kwindoda eyaziwayo nguYosefu. Igama lale Ntombi yayinguMariya.
Imfihlakalo yesibini: Ukutyelelwa kweNtombikazi enguMariya kumzala wakhe uSt Elizabeth
UMariya wahamba ezintabeni wangena kwisixeko sakwaYuda, esiya kutyelela uZakariya kunye nomzala wakhe uElizabhete. Xa uElizabhete wabona umbuliso kaMariya, waxhuma luvuyo ngenxa yentsikelelo yomntwana esibelekweni sakhe, ngalo mzuzu uSanta Elizabeth wayegcwele kwaye esikelelwe nguMoya oyiNgcwele. Ngelo xesha wadanduluka ngovuyo "Usikelelekile wena phakathi kwabo bonke abafazi kwaye sisikelelekile isiqhamo esiswini sakho."
Bhala oku kulandelayo ukuze uqhubeke:
Ishumi Isichotho Marys.
Omnye umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima.
UKumkani u-Caesar Augustus wabhengeza ukuba wonke umntu kufuneka abhalise. Ingxelo yokuqala eyaziwayo yenzeka kwisixeko saseCirino kunye nomlawuli waseSyria. Emva koko, uJoseph wavuma ukuya kwisixeko saseNazarete ukuya kudibana nomfazi wakhe, uMaria, eBhetelehem. Ngaloo mihla ke wazala umntwana wakhe wamazibulo; UMaria walusongela olu sana ngezithandelo waza walubeka emkhumbini, kuba babengenandawo ifanelekileyo yokuhlala. Ndwendwela esi sithuba silandelayo ukuze ufunde ngakumbi ngolwazi Iimfihlakalo zeRosari.
Thandaza uBawo Wethu, Isichotho sikaMarys, iGloria, umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima kwaye ekugqibeleni u-Ejaculation.
Imfihlakalo yesine: Ukunikezelwa kukaYesu etempileni
Ekupheleni kweentsuku ezisibhozo (8), usana lukaYesu lwanikwa igama, ngendlela iNgelosi uGabriyeli eyayimbize ngayo ngexesha lokukhulelwa esibelekweni sikaMariya. Xa iintsuku zokuzihlambulula zazaliseka, zakhokelela ekubonisweni kukaYesu, ngendlela eyamiselwa kuMthetho kaMoses.
Thandaza iGloria, umthandazo kwiNtombi Enyulu kaFatima kunye ne-Ejaculation.
Imfihlakalo yesihlanu: Umntwana olahlekileyo u-Yesu wamfumana etempileni
Abazali bakaYesu babesiya minyaka le eYerusalem njengesiqhelo ukuya kubhiyozela imithendeleko yePasika. Xa uYesu wayeneminyaka elishumi elinambini (12), abazali bakhe bamshiya yedwa ngelixa babebhiyoza, emva kweentsuku ezintathu (3) baqonda ukuba uYesu ulahlekile kwaye wafunyanwa etempileni ethetha nabaprofeti.
Iimfihlakalo eziLusizi zichaza ukuthanda kukaYesu.
Imfihlakalo yokuqala: Ubuhlungu bukaYesu eGadini
UYesu waya egadini wathi kubo bonke abafundi bakhe "Hlalani apha ngelixesha ndithandazayo." Emva kokuthabatha oonyana bakaZebhedi noPetros, waqala ukuba buhlungu nokudakumba okukhulu; Ngelo xesha wathi: "Umphefumlo wam ulusizi, phantse ukuya ekufeni, hlala nam."
Imfihlakalo yesibini ebuhlungu: Ukutyakatywa kukaYesu kubotshelelwe kwikholam
UBharabhas wakhululwa nguPilato, wamnikela ukuba abethwe. Bhala oku kulandelayo ukuze uqhubeke:
Ilandelwa yimfihlakalo yesithathu: isithsaba ngameva, imfihlakalo yesine, uYesu endleleni eya eKalvari ngomnqamlezo, kunye nemfihlakalo yesihlanu: ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu.
Ezi Mfihlakalo zizukileyo zithathwa njengeyokugqibela kwiRosari eNgcwele, zijongana nokuvuka kukaYesu.
Imfihlelo yokuqala: Uvuko lukaYesu
Imfihlakalo yesibini: Ukunyuka kukaYesu ezulwini
Imfihlakalo yesithathu: Ukuhla kukaMoya oyiNgcwele
Imfihlakalo yesine: Ukunyuka kukaMariya ezulwini
Imfihlakalo yesihlanu: Ukuxhonywa kukaMariya
Ezi Mfihlakalo zivumela amaKatolika ukuba abonakalise ubomi beNkosi yethu uYesu Kristu.
Imfihlakalo yokuqala: Ukubhaptizwa kukaYesu kuMlambo iYordan
Imfihlakalo Yesithathu: UYesu nobukumkani bamazulu
Imfihlakalo yesine: Ukwenziwa kumila kumbi kukaYesu Kristu
Ukufikelela kwiRosari eNgcwele kubalulekile ukuba ucengceleze iSalve, emva koko iitali zeNtombikazi kaMariya kwaye ekugqibeleni, oku kulandelayo kufuneka kubhengezwe: